विकासको मुद्दामा गौमुखीलाई जिताऔं - नयाँ दिशा अनलाइन::नयाँ युगको नयाँ अनलाइन
कुनै न कुनै हिसाबले चुनाव हाम्रो साझा पर्व बनेको छ, उत्सव बनेको छ । चुनावकै लागि भनेर धेरै मान्छेहरू प्रदेश छोडेर देश फर्केका छन्, सहर छोडेर गाउँ उक्लेका छन् । जनजनमा, घरघरमा, टोलटोलमा, चिया पसल, चोक, सडक किनार र सार्वजनिक ठाउँहरूमा चुनावबारे यथेष्ट छलफल तथा बहस हुन थालेको छ । पछिल्लो एवम् शिक्षित पुस्ता चुनावबारे बढी सचेत हुने कुरा धेरै नै सकारात्मक छ । राजनैतिक विचार र आस्थाका आधारमा तल्लोतहमा समेत व्यापक ध्रुवीकरण र बिभाजन देखापरे पनि त्यसले परिवर्तन र रुपान्तरणको अभियानमा नै सहयोग पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । हामीले हेर्ने भनेको परिणाम हो, परिणाम यही प्रक्रियाबाट नै प्राप्त हुनेगर्छ ।
राजनैतिक आस्थाका आधारमा हामी बेग्लाबेग्लै ठाउँमा हुनसक्छौँ, तर हाम्रो उदेश्य एउटै हुनुपर्छ । हाम्रो प्रयास समग्र गाउँको दीर्घकालीन हित, सुधार र विकासको साझा लक्ष्य प्राप्तिको लागि हुनुपर्छ । चुनाव मार्फत जनताले अनुमोदन गरेर आउने नेतृत्वले नै यसलाई कार्यनयन गरेर जाने हो । त्यसको लागि आउने नेतृत्व सेवा भावले प्रेरित(ओतप्रोत), सक्षम र कुशल, निरन्तर गाउँ–समाजमा क्रियासील, स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण भएको, लाभको पद धारण नगरेको, आफ्नै विवेकले आगामी ५ वर्षका लागि ठोस योजना र कार्यक्रम अघि सारेको, भरोसायोग्य र परिपक्व, असल र कर्तव्यनिष्ठ, प्रखर र निर्भीक, स्व्च्छ र निष्कलङ्क छवि ! यी सबै कुराले पूर्ण व्यक्तिले नेतृत्व गरे मात्रै गाउँको विकास सम्भव छ । र, त्यो विकास सुशासनमा आधारित हुन्छ । त्यसले सबैको अपनत्व ग्रहण गर्न सक्छ र स्वीकार्यता बढाउँदछ । त्यो सन्तुलित पनि हुन्छ र त्यसले भावी पुस्ताको हितलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । हामीले खोजेको हाम्रो पालिकाको भावी नेतृत्व यस्तै यस्तै होइन र ?
आज तीन जना उमेदवार आ–आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व गर्दै, आ–आफ्नो प्रतिबद्धता सहित गाउँ सरकारको नेतृत्व लिने दौडमा हुनुहुन्छ । सारा गाउँको भविष्य आज यी तीनजना नेताको हिस्सामा छ ! तर, जनताले कसलाई अनुमोदन गर्छन् र निर्णायक ठाउँमा पु¥याउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । स्थानीय निर्वाचन दलको आकारले भन्दा पनि उमेदवारको उचाईले अर्थ राख्ने भएकोले गौमुखीमा पनि असल र दुरदर्शि नेतृत्व पाउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
हाम्रो संविधानले परिकल्पना र अख्तियार गरेको विकेन्द्रीकरणको नितिलाई साँचो अर्थमा कार्यनयन गर्ने, गाउँ तथा नगरलाई सबलीकरण गर्ने, बलियो तथा स्वायत्त बनाउँदै लैजाने तथा सुशासन कायम गर्ने दायित्व गाउँ सरकारको हो । यति महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी लिने र त्यसलाई दृढताका साथ कुशलतापूर्वक पुरा गर्नसक्ने सक्षम व्यक्ति हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यसले मात्रै विकास र असल शासन सम्भव हुन्छ । यसमा खेलाँची गरियो भने गाउँलाई दशकौंपछि धकेलेको र भावी पुस्तामाथि पनि गद्दारी गरेको कलंकको दाग हाम्रो अनुहारमा लाग्नेछ ! इतिहासले सुम्पेको दायित्व पुरा गरेर जाने कि इतिहासको कठघरामा अपराधी भएर र कलङ्कित भएर उभिने, निर्णय लिने बेला आएको छ ।
हाम्रो जस्तो अविकसित र गरिब मुलुकमा र हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारण मतदाताहरूले गलत व्यक्ति रोज्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । मतदातामा भएको सचेतनाको कमिले गर्दा होस् या प्रलोभन र आश्वासनमा परेर उनीहरूले गलत मान्छे छनोट गर्ने खतरा हुन्छ । स्थानीय राजनीतिको सुशासन र दिगो विकासको मुद्दामा यसले ज्यादै ठूलो र दीर्घकालसम्म असर पु¥याउँछ । अतः अत्यन्तै संवेदनशील र दीर्घकालीन महत्त्वको यस विषयमा भ्रमहरूको निवारण गर्ने, मतदाताहरूलाई प्रलोभन र आश्वासनमा पर्न नदिने र सचेतना फैलाउने जिम्मेवारी सचेत नागरिकको हो । हामीले सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ । भविष्यप्रति चिन्तित बन्ने र वर्तमानको गाम्भिर्यतालाई आत्मसात गर्ने कुरा तपाईं हाम्रो मुख्य चुनौती हो । हामीले बुझ्न विलम्ब गर्नुहुँदैन कि हामी अहिले इतिहासको अत्यन्तै संवेदनशील घडी र अवस्थामा उभिएका छौँ ।
अन्तमा, गौमुखीको उज्ज्वल भविष्य हाम्रो हातमा आएको छ । अर्थात्, यहाँको सुशासन सहितको समृद्धिको महाअभियानमा नायकत्व गर्न कसलाई जिम्मेवारी दिनेभन्ने फैसला गौमुखीका २६ हजार मतदाताले निक्र्योल गर्नेछन् ! राजनैतिक हिसाबले विशिष्ट र मतदाताको राजनैतिक चेतनाको हिसाबले जिल्लाकै अलग पहिचान बोकेको गाउँसरकारको भावी नेतृत्वमा कसलाई पु¥याउने भन्ने निर्णय अत्यन्तै सावधानी र विवेकपूर्ण तवरले लिन जरुरी छ ।
हाम्रो एउटा मतले गाउँ सरकारको भविष्य निर्धारण हुनेहुँदा त्यो मत गलत ठाउँमा नहाल्ने र हाल्न नदिने कर्तव्यबोध गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । समग्र गाउँपालिकाको सुशासनसहितको दीर्घकालीन र सन्तुलित विकासको लागि, गौमुखीलाई जिल्लाकै सान र देशकै नमुना गाउँपालिका बनाउनका लागि सक्षम, वैचारिक, जिम्मेवार, रैथाने र समुदायप्रति प्रतिबद्ध उमेदवारलाई मतदान गरौं र विजयी गराऔँ ! असल उमेदवारको पराजय र खराब व्यक्तिको उदयले सिङ्गो पालिकाको हार भएको ठहर्नेछ । धन्यवाद, जय गौमुखी !